Danjiraha Sacuudiga ee Somaliya oo booqday Isbitaal Banaadir (SAWIRRO) | Dhacdo
Danjiraha Sacuudiga ee Soomaaliya, Amb. Maxamed Cabdikhani Al-Khayat, oo uu wehliyo Agaasime Goboleedka Xaruunta Bani’aadanimada iyo Gargaarka ee Boqor Salman, Sacad Muhanna ayaa waxaa xarunta loo diyaarinayo dhaqidda kelyaha ku soo dhaweeyay Maamulka Isbitaal Banaadir iyo Masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Somaliya.
Safiirka iyo xubnihii kale ee la socday ayaa soo indha-indheeyay Xarunta Dhaqidda kelyaha, oo hadda Boqortooyada Sacuudiga ay rabto in ay qorshaheeda dhameystirto, maadaama horey loogu hakiyay sababo la xiriira, iyadoo Dowladda Somaliya ay xaruntaasi u diyaarisay la tacaalidda xanuunka COVID-19.
Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Axmed oo ku hadlay magaca Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin hawlgalinta xaruntan oo baahi weyn loo qabo.
Agaasimaha Isbitaalka Hooyada & Dhallaanka ee Banaadir, Drs Fartuun Shariif Maxamed ayaa sheegtay in xaruntan ay ka faa’iideysan doonaan dad badan oo u dhiban kelya dhaqista.
Safiirka Boqortooyada Sacuudiga ee Somaliya ayaa dhankiisa sheegay inay sii wadi doonaan garab istaadga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, isla-markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhameystiri doonaan Xarunta Dhaqidda kelyaha, oo ay ka faa’iideysan doonaan dad badan.
Qaybta Dhaqidda Kelyaha ee Isbitaalka Baanadir, oo ay maalgalineyso Dowladda Sacuudiga ayaa la fillayaa in goor dhow la hawlgeliyo, wuxuuna qorshuhu yahay in lagu dabiibo dadka danta yar ee aadka ugu baahan dhaqidda kelyaha.